Ụlọ ọrụ na-eme achịcha |Ndị na-emepụta ihe na-eme achịcha China, ndị na-ebubata ihe
Kwesịrị ekwesị maka obere oghere: Ihe owuwu silicone dị nro na nke na-agbanwe agbanwe na-enye ohere ka ute a tụgharịa ma ọ bụ gbakọọ obere, zuru oke maka ịchekwa n'ime oghere ndị dị ka drawer kichin, ụlọ, RVs, ma ọ bụ ndị na-ama ụlọikwuu.
ỌTỤTỤ JI: Ihe oriri YACEE na-eguzogide okpomọkụ (ruo 450º), na-enye gị ohere iji ya dị ka trivet, iji chebe countertops na tebụl site na ite ọkụ ma ọ bụ ngwa, ma ọ bụ dị ka ihe na-ajụ oyi.ọ na-agbakwa okpukpu abụọ dị ka trivet na-eguzogide okpomọkụ maka tebụl gị na countertop, nke zuru oke dị ka anụ ụlọ anụ ụlọ, friji liner, cupboard liner.Ọtụtụ ojiji, ọ ga-eju gị anya na ị bi na-enweghị ya.
A na-eji silicone na-eme achịcha na-eme achịcha, na-eme achịcha dị iche iche na ute a, ị ga-azọpụta ọtụtụ ọrụ ma nwee obi ụtọ.Our silicone pastry mat is Safe, Inteurable, Beautiful Design & Premium Quality.Ihe mkpuchi silicone a nwere ike iguzogide okpomọkụ site na -30 ruo 480 ° F. Ọzọkwa, a na-eji ihe eji eme ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma, ọ dị mma maka ọkwa dị iche iche nke mgwakota agwa na-egbuke egbuke na obere nsị.
Microwave Safe 30 Cavities Obi Ụdị ịkpụzi mpempe akwụkwọ Chocolate A na-emegharịgharị Silicone Macaron Baking Mat
Silicone Safe Premium: Anyị na-etinye nnukwu mkpa maka ahụike nke ndị ahịa anyị.Ya mere, anyị na-enye ọkwa nri silicone nke ọma iji mee ka ọ dị mma.
Ute a na-esi esi silikone dị mma nke ukwuu na-adịghị nnyapade.Ma ọ dị mfe iji akwa ihicha.
Mpempe akwụkwọ nri Silicon Pyramid dị mfe dị ọcha
Enwere ike ịsacha na nke enwere ike iji ya mee ihe: A pụrụ iji mmiri ncha hichaa ma ọ bụ tinye ya n'elu ebe a na-asa efere, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ihicha na iji ọzọ mee ihe maka nri ụtụtụ, nri ehihie, ma ọ bụ nri nri abalị.
Achọghị akwụkwọ akpụkpọ anụ ọzọ ma ewepụtakwala ogologo oge ihicha trays bred, ute silicone anyị na-eme ka ịsa achịcha na-enweghị osisi dị mfe!
Omenala fiberglass mgwakota agwa pastry oven baking mpempe akwụkwọ kuki liner macaron silicone baking ute
Ma mpịachi: Enwere ike ịdaba.
Ọrụ Omenala: Nye ọrụ ahaziri ahazi gụnyere: akara nbipụta, ụkpụrụ mbipụta, agba omenala.
Nnukwu Baking Pizza Pie Rolling igwakorita mgwakota agwa Mats Silicone pastry Mat na nha.
Na nha - centimita na inch nha, na-enyere gị aka ịme ntụ ọka zuru oke;
Na-atụgharị maka nchekwa dị mfe.